Apple, Nokia, Sony na-echegbu onwe ya ihu na teknụzụ 5G kacha ọhụrụ nke Samsung
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Apple, Nokia, Sony na-echegbu onwe ya ihu na teknụzụ 5G kacha ọhụrụ nke Samsung
Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ South Korea na -agbasa • Technology • Akụkọ dị iche iche
Samsung ọ ga-ebute ụzọ na smartphones? Apple, Nokia, na Sony ga-enwe nchegbu. Samsung kwupụtara taa ụlọ ọrụ mbụ 16-gigabit (Gb) LPDDR5 mobile DRAM, na-eji teknụzụ ultraviolet (EUV). Ewubere na usoro nke 10nm-klas (1z) nke Samsung nke atọ, 16Gb LPDDR5 ọhụrụ nwere nnukwu ọrụ nchekwa ekwentị yana ikike kachasị iji nwee ike ịmekwu ndị ahịa iji nweta uru zuru oke nke atụmatụ 5G na AI na smartphones ndị na-esote.
Samsung Eletrọniki ms onye ndu ụwa na teknụzụ ebe nchekwa dị elu, taa kwupụtara na usoro mmepụta nke abụọ ya na Pyeongtaek, Korea, amalitela ihe mmepụta ihe nke
“Onye 1z nke dabeere na 16Gb LPDDR5 na-ebuli ụlọ ọrụ ahụ aka n'ọnụ ụzọ ọhụrụ, na-emeri nnukwu nsogbu mmepe na ntanye DRAM na ọnụ ọgụgụ dị elu, "ka Jung-bae Lee, osote onye isi oche nke DRAM Product & Technology na Samsung Electronics kwuru. “Anyị ga-aga n’ihu na-agbasawanye ọnụọgụ DRAM anyị adịchaghị na gafere ahịa na-achọ ka anyị na-eduga n'ịzụ ahịa nchekwa ebe niile. ”
Kasị, Kachasị-ike Mobile Memory
Dabere na usoro usoro (1z) nke kachasị elu ugbu a, 16Gb LPDDR5 ọhụrụ nke Samsung bụ ihe nchekwa mbụ iji mepụta teknụzụ EUV, na-enye oke ọsọ na ikike kachasị na mobile DRAM.
Na megabits 6,400 kwa nke abụọ (Mb / s), LPDDR5 ọhụrụ a dị ihe dịka 16 pasenti karịa 12Gb LPDDR5 (5,500Mb / s) achọtara n’ọtụtụ igwe eji egwu egwu ugbu a. Mgbe emere n'ime ngwungwu 16GB, LPDDR5 nwere ike ịnyefe ihe dịka 10 5GB buru ibu HD fim, ma ọ bụ data 51.2GB, n'otu nkeji.
Site na iji usoro 1z azụmaahịa mbụ, ngwugwu LPDDR5 dị pasent 30 karịa nke bu ya ụzọ, na-enyere 5G na igwefoto igwefoto dị iche iche aka yana ngwaọrụ mpịachi iji tinye ọrụ na arụmọrụ. 16Gb LPDDR5 nwere ike wulite ngwungwu 16GB nwere naanị mkpirisi asatọ, ebe onye bu ya ụzọ 1y chọrọ mgbawa iri abụọ (asatọ asatọ 12Gb na ibe asatọ 12Gb) iji nye otu ikike ahụ.
Site na ịnapụta mbụ 1z dabere na 16GB LPDDR5 package nye ndị na-eme smartphone ekwentị, Samsung na-ezube ime ka ọnụnọ ya sie ike na ahịa ekwentị mkpanaka na 2021. Samsung ga-agbasawanye ojiji nke onyinye LPDDR5 ya na ngwa ngwa ụgbọ ala, na-enye usoro okpomọkụ dị ogologo iji zute oke nchekwa na ntụkwasị obi na oke gburugburu.
Mụbawanye ike imepụta na Pyeongtaek Complex
Ninggba ihe karịrị square mita 128,900 (ihe karịrị nde square 1.3) - ya na ihe ruru 16 bọọlụ bọọlụ - Samsung's Pyeongtaek Line 2 bụ akara ngosipụta semiconductor kachasị ukwuu ruo ugbu a.
Usoro ohuru nke Pyeongtaek ga - abụ isi ihe nrụpụta maka teknụzụ semiconductor kachasị elu nke ụlọ ọrụ ahụ, na - enyefe DRAM nke na - esote ya na V-NAND na - esote ya na ihe nchoputa ihe, na - eme ka ụlọ ọrụ ahụ na - edu ndú. in oge ụlọ ọrụ 4.0.